【各国大使館へのお願い。公用車による現地視察】ミャンマー在住の友人たちから - みんがらネットワーク　Mingalar Network
Request to embassies. Local inspection by official vehicles
In Myanmar, many people have been killed and injured in the protests against the military coup. We do not want to see any further casualties. We urge all the embassies of each country to visit the crackdown areas with the embassy's vehicles and protect the civilians using diplomacy.
Embassy staff shall take official embassy vehicles to inspect dangerous areas. Since it is justafield trip, the military cannot stop them from doing so. By doing this, we believe it is possible to deter violence by the military.
If each embassy cooperates and sends out multiple official vehicles, it will beamore extensive and effective deterrent. It is necessary to avoid further casualties in Myanmar.
Please consider this matter at your embassies.
သံရုံးများသို့တောင်းဆိုခြင်း။ တရားဝင်မော်တော်ယာဉ်များအားဖြင့် အခင်းစစ်ဆေးပေးပါရန်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် လူအများအပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရလျက်ရှိပါသည်။ နောက်ထပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့လိုပါ။ ထို့ကြောင့်သံရုံး၏မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းသည့်ဒေသများသို့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သံတမန်ရေးရာကို အသုံးပြု၍ ပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးရန် နိုင်ငံအသီးသီးရှိသံရုံးအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါသည်။
သံရုံးဝန်ထမ်းများသည်အန္တရာယ်ရှိသောဒေသများကိုစစ်ဆေးရန် တရားဝင်သံရုံးကားများကိုယူရမည်။ ၎င်းသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းမျှသာဖြစ်သဖြင့် စစ်တပ်တွင်တားစီးပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် စစ်တပ်၏အကြမ်းဖက်မှုများကို အတန်အသင့် လျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
အကယ်၍ သံရုံးတိုင်းမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး တရားဝင်မော်တော်ယာဉ်များကို စေလွှတ်ပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ထိရောက်သော အဟန့်အတားဖြစ်လိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ်ထိခိုက်သေဆုံးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ယခုကိစ္စကို သံရုံးများအနေဖြင့် စဉ်းစားပေးစေလိုပါသည်။
Copy ကူးပြီး ပြန်တင်ပေးပါ။